Sidee baan u kormeeraa Amazon qiimaha iyo qalabka tracker iibka aad ku talin kartaa?
Maalmahan, adduunka casriga ah ee Retailing ayaa inta badan ka soo horjeeda ganacsiga ganacsiga ganacsiga ee ganacsiga. Inta badan iibiyayaashu waa bilaash si ay u helaan badeecooyinka ay ku qoran yihiin xitaa iyaga oo aan iyagu dukaannadooda u adeegsan. Hase yeeshee marar badan ganacsatada cusubi waxay ku fashileen inay ka baxaan dhulka, taas oo ay ugu wacan tahay la'aanta fikrado tartan ah oo si khaas ah loogu baahan yahay iyada oo la adeegsanayo waqtiyadii ugu dambeeyay ee bilaabma mashruucyadooda. Iyo sida suuqa caanka ah ee caanka ah ee internetka sida Amazon ma aha mid ka reeban xeerkan dhabta ah aan fiicneyn. Sidaas darteed, waxaan hoosta ku socdaa inaan kuu muujiyo inaad xulato xulasho wanaagsan oo gaar ah qalabka loo yaqaan 'Amazon sales tracker' iyo noocyo kale oo ah barnaamijyo wax ku ool ah kuwaas oo noqon kara midka ugu habboon ee bilawga ganacsigaaga macaamilka ee guuleysta.
Dhamaan gebi ahaan waa waalan, waa inaan qiraa. Laakiin qalab this tracker Amazon waa caawinaad online online aad u badan, inta badan markii ay timaado qiimaha. CamelCamelCamel waxay kuu soo diri kartaa digniino habaysan (oo ay maraan email ahaan, ama Twitter) wixii isbeddel ah ee qiimaha aad u baahan tahay inaad ku sii socotid, tusaale ahaan marka qiimaha badeecada aad hadda kormeereyso uu bilaabmayo fuulitaanka, ama marka loo eego, marka si dhakhso ah loo jiido . Qaadashada 18 milyan oo badeecado ah oo kuyaal Amazon, qalabkan raadraaca iibka ayaa sidoo kale ku siin kara taariikhda dhabta ah ee lagu muujiyey habka qiimaha la adeegsan karo. Waxaad sidoo kale isku dayi kartaa kordhinta shabakada Webka si aad uga faa'iideysato habka ugu habboon ee qiimaha raadraaca. Keepa
Heerka labaad ee Amazon iibinta qalabka raadraaca kaas oo sidoo kale diiradda saara badan qiimaha, Keepa wuxuu bixiyaa taageero caalami ah oo daboolaya qiyaasta qiyaasta qiyaasta ee 11 dal oo kala duwan. Aniga ahaan, waxay noqon kartaa xulashadaada ugu fiican marka ay timaaddo si aad u eegto garaafka taariikhda qiimaha, ka warhaynta helitaanka hadda iyo isbedelka qiimaha, marka la barbardhigo wax kasta oo qiimo jaban iyo hubinta heshiisyada ugu dambeeyay ee Amazon. Nidaamkani wuxuu ku hadlaa laftiisa, sidaas darteed waxaa habboon in la isticmaalo ama ugu yaraan tijaabo. SalesLogic
SalesLogic sidoo kale waa wax aad u wanaagsan in si macquul ah loogu daro qalabka tracker tracker ee Amazon. Tixgelinta in badanaa xitaa suuqyada khabiirada ayaa laga yaabaa in ay iska dhaafaan qaybaha suuq-geynta asaasiga ah ee qiimaha badeecada. Marka ay timaaddo calaamad muujinaysa marin caafimaad leh, si sax ah u noqoto. Guud ahaan, qaabkani wuxuu suurtogal u yahay in la qiimeeyo qiimahaaga afar qaybood oo kala duwan - Baahida Box (qiyaasta qiimaha la filayo in lagu wado badeecad aad ku iibsato booska Suuqa Goobta), Meel (qiimaha loo baahan yahay si loo helo badeecada lagu meeleeyay natiijooyinka raadinta Goobo gaar ah), Sales (qiimaha qiimaha ugu sarreeya si aad u sarayso iibkaaga shabakada), Khariidadda (qiimaha isku midka ah ee la midka ah kuwa kaa soo horjeeda). Dabcan, waxaa jira habab kale oo badan oo lagu qiimeeyo Amazon, iyo sidoo kale tiro yar oo ah qalabka software-ka ee kale ee ka shaqeeya cilmi-baarista muhiimka ah, falanqaynta tartanka, liiska sugitaanka, iwm. Inta badan waxaa laga helaa helitaanka furan, sidaas darteed ha xaddidin naftaada Amazon qiimaha kaliya - u dhaqaaq oo sii wad si aad u raadiso fursado ka fiican oo halkaas ka Source .